ख’त’र’नाक संकेत, निकाे भएका सं’क्रमितकाे लागी भर्खरै आयाे यस्ताे खबर – Jagaran Nepal
ख’त’र’नाक संकेत, निकाे भएका सं’क्रमितकाे लागी भर्खरै आयाे यस्ताे खबर
के एक पटक कोरोना भाइरस संग बिरामी मान्छे फेरि कहिल्यै कोरोना रोग लाग्दैन? यदि कुनै व्यक्ति कोरोनाबाट संक्रमित हुन्छ भने ऊ कहिलेसम्म कोरोनाबाट सुरक्षित छ? यी दुबै प्रश्नहरू धेरै समयदेखि सोधिएको छ, तर चिकित्सा विशेषज्ञहरूले अहिलेसम्म कुनै ठोस जवाफ दिन सकेका छैनन्। अब एउटा ठूलो अध्ययनले अचम्मकाे जानकारी पत्ता लगाएको छ।
स्पेनमा गरिएको एउटा अध्ययनले देखायो कि कोरोना बिरामीहरूको शरीरमा बनेका एन्टिबडीहरू केही हप्तामा हराउन सक्छ। विशेष गरी ती व्यक्तिहरूमा जसलाई कोरोना सं,क्रमणको कारण केवल सानो लक्षणहरू थिए। त्यो हो, ती मानिसहरू जो कोरोना मा संक्रमित भए तर केवल हल्का बिरामी भए, उनीहरुमा प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुन्छ र केहि हप्तामा गायब हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, ख,तरा रहनेछ कि यी व्यक्तिहरू फेरि कोरोना सं,क्रमित हुँदैनन्।
thetimes.co.ukको रिपोर्टका अनुसार 7०,००० भन्दा बढी मानिसहरू स्पेनमा अध्ययन गरिरहेका थिए। अध्ययनको क्रममा, कोरोना एन्टिबडीमा सकारात्मक फेला परेका १४ प्रतिशत व्यक्तिहरू पहिले परीक्षण गरिएका थिए, तर जब उनीहरूको दुई महिना पछि परीक्षण गरियो, तब तिनीहरूमा एन्टिबडीहरू फेला परेनन्। यो खास गरी हल्का लक्षण भएका मानिसहरूलाई देखियो।
अध्ययन ल्यान्सेट जर्नल मा प्रकाशित भएको थियो। यस अध्ययनको नेतृत्व गर्ने डाक्टरहरु मध्ये, स्पेनको कार्लोस3स्वास्थ्य संस्थानका निर्देशक, रकिल योगीले भने – “प्रतिरक्षा अधुरो हुन सक्छ। प्रतिरक्षा अस्थायी हुन सक्छ। यो छोटो समयको लागि देखा पर्न सक्छ र हराउन पनि सक्छ। हामीले सबै आफैंलाई बचाउनु पर्छ र अरु व्यक्तिको पनि सुरक्षा गर्नु पर्छ।
अन्वेषकहरूले यो पनि भनेका छन कि पहिले त्यस्तो प्रमाणहरू पत्ता लाग्यो कि बिरामीहरुमा लक्षणहरु बिना पर्याप्त एन्टबडीहरू उत्पादन गर्न सकिदैन। इङ्ल्याण्डको रिडि विश्वविद्यालयका भाइरोलजीका प्राध्यापक इयान जोन्सले भने कि एन्टिबडी परीक्षणमा सकारात्मक पाएकाहरूले आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्नु हुँदैन। तिनीहरू सुरक्षित हुन सक्छन्, तर यो अझै स्पष्ट छैन।
उही समयमा, यो अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि कोरोनाबाट प्रभावित ५.२ प्रतिशत मानिसहरूले एन्टिबडीहरू विकास गरेको छ। तर यस तथ्याङ्को आधारमा, यो पनि भनिन्छ कि यो प्राकृतिक तरिकामा कोरोना बि,रूद्ध बथानको प्रतिरोध शक्ति प्राप्त गर्न सम्भव छैन।
यसैबीच, जेनेभाको इमर्जिंग भाइरल रोगहरूको केन्द्रका प्रमुख इजबेल एकरले र जेनेभा विश्वविद्यालयका भाइरोजिस्ट बेन्जामिन मेयरले उक्त अध्ययनको नतीजामा भने – ‘नतिजाले देखाउँदछ कि झुण्ड रोग प्रतिरोध क्षमता स्वाभाविक रूपमा प्राप्त गर्नु मात्र धेरै अनैतिक मात्र असम्भव हुने छैन ‘ आजतकबाट अनुवाद